IPhone 6s waa taleefoonka ugu dhaqsaha badan suuqa | Wararka IPhone
Sida laga soo xigtay Anandtech, iPhone 6s waa taleefanka ugu dhaqsaha badan suuqa
Paul Aparicio | | Tartanka, iPhone 6s, iPhone 6s Plus
IPhone 6s iyo iPhone 6s Plus waxay jireen muddo dheer oo ku filan dhammaan noocyada baaritaannada in la sameeyo. Tijaabooyinka hoos u dhaca, tijaabooyinka iska caabbinta biyaha iyo, dabcan, tijaabo horey ayaa loo sameeyay si loo cabbiro waxqabadkeeda bartilmaameedyo. Haddii ay dhacdo in imtixaanku aanu ku filnayn, Anandtech doonayay inuu sameeyo baaritaankiisa iyo, mar labaad, waxaa la muujiyay in iPhone 6s waa aaladda ugu dhaqsaha badan suuqa, Ka sii fiicnaanshaha tartamayaasheeda waaweyn waa xallin.
Waxay u muuqataa in kororka RAM ee 1GB ilaa 2GB uu yahay mid la dareemi karo. Tag haddii ay muujiso. Kooxda ay sameysay 2GB iyo processor A9 (iyo M-co-processor) wuxuu dhigay iPhone 9s dusha sare ee guud ahaan qiimeynta, isagoo kaliya ka dambeeya Microsoft Surface 6 tijaabooyin badan. Maxay cadahay ka dib markii la arkay astaamaha Anandtech waa in iPhone 3s uu ka sareeyo dhamaan qalabka hadda la heli karo.
Maskaxda ku hay in jaan-gooyeyaashu ay yihiin tiro uun. Waxa ugu muhiimsani waa adeegsiga maalin kasta, oo ah goob dadka isticmaala oo horeba gacanta ugu haystay iPhone 6s ama iPhone 6s Plus ay sidoo kale sheegaan inay si fiican u shaqeeyaan. Qaar ka mid ah dadka isticmaala waxay ogaadeen a farqi weyn ayaa xitaa ka badalaya iPhone 6 iyo wixii ka sarreeya oo dhan waxay ku ogaanayaan xawaaraha uu Aqoonsiga Taabashadu ku aqoonsanayo faraha.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, falanqaynta badankood waxay noo sheegaan inaysan mudnayn in wax laga beddelo haddii aan horey u haysanno iPhone 6 mooyee haddii aan dooneyno inaan isku dayno 3D Touch, Kaamirooyinka cusub ama Sawirada Tooska ah waxaan sidoo kale heysanaa lacag aan ku iibsano aaladda cusub. Caqli ahaan, hadaan rabno kamarad 12 megapixels iyo isticmaalka nidaamka taabashada cusub ee taabashada ma lihin xulasho aan ka ahayn inaan iibsano iPhone 6s.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 6s » Sida laga soo xigtay Anandtech, iPhone 6s waa taleefanka ugu dhaqsaha badan suuqa
Samsung waa inay timahooda jiidayaan hahahahaha
Kuwii yidhi waxay noqonaysaa iib iib ... ZASCA ...
Layaab malahan inay timahooda kala baxaan ... hadii ay saf u galaan si kor loogu qaado s6 geesooda safafka Apple hahahahahaha, WAA MAXAY CIQAAB ... S6 iibka ayaa aad u xun ...?
Waxa aan wax badan igu kordhinaynin waa in faraq aad u badani udhaxeeyo 6S iyo 6. Waxaan isku raacsanahay in 6S ka fiicanyahay ... laakiin muxuu farqiga noocaas ahi u jiraa?
Tijaabooyinkaas ayaa ka been badan Kim's nachas. Maaddaama Samsung Galaxy S6 ay ka hooseyso dhammaan, oo aan qufaco badeecooyinka Apple marka hore. Haha Samsung waxay isticmaashaa qalabka heerka-koowaad ah halka Apple ay isticmaasho qalab duugoobay oo xitaa kan ugu indhoolaha badan ama aadka u jecel uu yaqaan. Tirtir faallooyinka hadaad jeceshahay, anigana waxaan ku hayaa iphone 6 jeebkeyga Laakiin waxa uu yahay lama isku haysto.
Qalabka duugoobay? Looma baahna in lala murmo qof aan waxba ka aqoon qalabka.
Haddii ay wax ii caddaadeen sawiradan, waa in Microsoft surface pro 3 uu fiican yahay !!! Hahaha
MAME emulator wuxuu ka shaqeeyaa Apple TV 4 [Video]